မြစ်သံလွင်ရဲ့ဆည်းဆာအလှကိုခံစားရင်း အရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာတွေသုံးဆောင်နိုင်စေဖို့……….. – FoodiesNavi
By yin sandi On February 26, 2018 0
?? ? နေဝင်ဆည်းဆာချိန်မှာ မြစ်သံလွင်ရဲ့လန်းဆန်းအေးမြတဲ့ လေနုအေးလေးကိုရှိုက်သွင်းရင်း ?????? အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကို သုံးဆောင်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင်ချိုမြိန်လိုက်မလဲနော်။ ??? ဒီလိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ချိုမြိန်လှပတဲ့ဘဝကို တမဟုတ်ချင်း ရရှိနိုင်စေဖို့အတွက် Foodies Navi ကနေမော်လမြိုင်မြို့က အစားအသောက်ကမ္ဘာလေးထဲကို ခေါ်သွားချင်ပါတယ်နော်။ ?????? ဒီကမ္ဘာလေးကတော့ ? My Mawlamyine River View Restaurant ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့တည်နေရာလေးကတော့– ????
-Myoma Jetty , Strand Road , Mawlamyine .
My Mawlamyine မှာရရှိနိုင်တဲ့အစားအစာတွေကတော့– ??????? ပုဇွန်တုံယမ်း ၊ ကြက်တုံယမ်း ၊ ပင်လယ်စာတုံယမ်း ၊ ကြက်အုန်းနို့ဟင်းချို ၊ ဝက်သားဂျပန်တို့ဟူးဟင်းချို ၊ ပင်လယ်စာပဲကြာဇံဟင်းချို ၊ ကြက်အစိမ်းရောင်ဟင်းချို ၊ ပုဇွန်သီးစုံဟင်းချို ၊ ဆူကီဟင်းချို(ထိုင်းစတိုင်) ၊ ကြက်ပင်စိမ်း ၊ ဝက်/ကြက်/ပင်လယ်စာ ခေါက်ဆွဲကြော် ၊ ဝက်/ကြက်/ပင်လယ်စာ ထမင်းကြော် ၊ ပုဇွန်မန်ကျည်းဆော့စ် ၊ ဂဏန်းပျော့မန်ကျည်းဆော့စ် ၊ ပုဇွန်ပဲကြာဇံပေါင်း ၊ ငါးကွန်းရှပ်အရသာ(၃)မျိုး ၊ဝက်စဉ်းကောပင်စိမ်း ၊ ပင်လယ်စာပေါင်း ၊ ဘဲဥဆားငံငါးခူမွှကြော် ၊ ဝက်ခေါက်ကိုက်လန် ၊ သံပုရာဝက်ကင်သုပ် ၊ မှိုပုဇွန်သုပ် ၊ ရေခူသုပ် ၊ ဆေးမြစ်စုံသုပ် ၊ ဝက်သုံးထပ်သားကင်သုပ် ၊ ဝက်မုန့်ကြွပ်ကြော် ၊ ဝက်ခေါက်ကြွပ် ၊ ပုဇွန်ငါးထုပ်ကြော် ၊ ကြက်အရိုးနုကြော် ၊ ပုဇွန်လှော် ၊ ငါးစဉ်းကောသုပ် ၊ ရွေငါးဆနွင်း စတဲ့စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ???
ဟင်းလျာနာမည်နဲ့ပုံတွေကို မြင်ရုံနဲ့တင်မြည်းစမ်းခံစားချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေမှာအသေအချာပါပဲ။ ??? လတ်ဆတ်ကောင်းမွန်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အသားငါးတွေကိုသန့်သန့်ရှင်းရှင်းချက်ပြုတ်ထားတာကြောင့် အရသာကတော့ လျှာမှာစွဲငြိသွားစေမှာအသေအချာပါပဲ ။ ??? ထူးကဲတဲ့အရသာလေးတွေ လျှာပေါ်ဝဲနေစေမယ့် နူးညံ့လတ်ဆတ်တဲ့သားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ အာရုံခံစားတဲ့လျှာဖျားလေးကြားက အရသာပါးပါးလေးက လူးလူးလှိမ့်လှိမ့်ပျံ့နှံ့သွားတဲ့ခံစားချက်က လုံးဝကိုရှယ်ပဲနော်။ ??? ဒီလိုအရသာတွေကို မြစ်သံလွင်အလှအပကို ရှုစားရင်းကြည်ကြည်နူးနူးခံစားကြည့်ချင်ရင်တော့ My Mawlamyine River View Restaurant ကိုသာအပြေးလေးသွားလိုက်တော့နော်။ ??????‍♀️??‍♀️??‍♂️
Image Source : www.facebook.com/mymawlamyineriverviewrestaurant
In Restaurant Guides Tagged Chicken Tom Yum, Fried Noodle, fried rice, Pork curry, Prawn Tom Yum Leaveacomment
ဆီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ဂျပန်စတိုင်ဟင်းလျာတွေကို အစပ်အဟပ်တည့်စွာသုံးဆောင်နိုင်မယ့်…